मातृत्व मलाई बच्चा चाहिन्छ
गर्व विज्ञान मा शब्द उपजाऊ अवधि सामान्यतया मासिक चक्र को समयमा अन्तराल को रूप मा बुझिन्छ, जसको समयमा अन्डा को उर्वरता को संभावना सबै भन्दा ठूलो छ। यो follicle बाट यौन सेल को रिलीज संग शुरू हुन्छ र यसको मृत्युको समय सम्म रहन्छ। तथापि, शुक्राणुओजोआको शारीरिक विशेषताहरू र उनीहरूको जीवन प्रत्याशा दिइन्छ, मासिक धर्म चक्रको उपजाऊ अवधिको लम्बाइ केही फरक भएको छ। यस प्यारामिटरमा नजिकको अवलोकन गरौं, र गरौं कि महिलाहरूले बच्चालाई कल्पना गर्ने योजना कसरी सही ढंगले यसलाई गणना गर्छ।
प्रजनन अवधि कति चोटि हुन्छ?
पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, यसको अवधि सिमितता र अन्डाको अस्तित्वको व्यवस्थितता र समयमा निर्भर गर्दछ ।
त्यसैले, अनुकूल वातावरणमा सामान्यतया पुरुष सेक्स कक्षहरूले गतिशीलतालाई 3-6 दिनसम्म राख्न सक्छ। यही कारण, महिला प्रजनन अंगहरूलाई मारेर पछि, स्पर्मेटोजोआ मोबाइलमा5दिनसम्म रहन सक्छ।
यस तथ्यलाई ध्यान दिँदै, महिलाहरु मा उपजाऊ अवधि को गणना गरिन्छ। सञ्झ्याल गणना गर्न, कुन अवधारणा सम्भव छ, एक महिलाले ovulation को शुरुवात देखि 5-6 दिन लिन पर्छ। यो समयमा तपाईं बच्चालाई गर्भ गर्न सक्रिय प्रयासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै महिलाहरु जसले अझै बच्चाहरु योजना नगर्ने, यो सतर्क हुनु सार्थक हो र मासिक धर्मको यस अवधिको अवधिमा गर्भनिरोधक प्रयोग गर्नुहोस्।
माथिबाट, हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि प्रत्येक चक्रमा प्रजनन अवधि 6-7 दिन भन्दा बढी हुन्छ।
प्रजनन अवधिको गणना गर्न के तपाईंलाई थाहा छ?
बुझ्न को लागी उपजाऊ अवधि र जब यो महिलाहरु मा सुरू हुन्छ, म तपाईंलाई यो गणना गर्न को लागि सही एल्गोरिदम को बारे मा बताउन चाहन्छु।
सर्वप्रथम, एक महिलाले उनीहरूको शरीरमा ओभलसनको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ। यो एक भौतिक विधि प्रयोग गरेर वा ओल्ल्युसन परीक्षण प्रयोग गरिन सक्छ।
पहिलो मासिक मासिक चक्र भरमा आधारल तापमानको लामो-दीर्घ अवलोकन समावेश छ। यो ध्यान दिनुपर्छ कि यो विधि प्रयोग गरेर अधिक विश्वसनीय परिणामहरू प्राप्त गर्न, मापन कम्तीमा 2-3 मासिक धर्म चक्र प्रदर्शन गरिनु पर्छ। तापमान मानहरूको ग्राफमा, बेसल तापमानमा थोपा वृद्धि हुने समय 37-37.2 डिग्री हुन्छ ovulation हुनेछ। यो बाह्य परिस्थितिहरूमा ओल्ल्युअल प्रक्रियाको सुरूको बलियो निर्भरतालाई ध्यान दिनुपर्दछ, यो सँधै यो विधि द्वारा ovulation को शुरुवात को निर्धारण गर्न सम्भव छैन।
यसैले महिलाहरु को निदान को एक तरिका को सहारा, एक ओल्ल्युशन परीक्षण को रूप मा। परीक्षणको साथ समावेश गरिएका निर्देशनहरू पछ्याउँदै, एक महिलाले, एक दिनको सटीकताको साथ, कूपको परिपक्व अण्डको रिहाईको समय निर्धारित गर्दछ। यो विधि सबैभन्दा भरपर्दो हो।
महिलाको शरीरमा ओभिलेशनको अवधि स्थापना गर्ने तरिकाबारे बोल्नु, यो विधि उल्लेख गर्नु असम्भव छ, जसमा गर्भाषीय नहरबाट सट्टाको गुणस्तर र प्रशस्तता को मूल्यांकन गर्दछ। यसलाई प्रयोग गरेर, केटी मकस प्रकृति को पछिल्लो मासिक मूल्याङ्कन पछि पहिलो स्थान मा बनाइन्छ, यसको पहिलो अस्पष्टता। पूर्व-ओल्युलेटरी अवधिमा, मकई पारदर्शी र चिपचिपा हुन्छ, बाह्य धेरै चिकन अन्डाको प्रोटीन जस्तो।
यसकारण, यदि हामी कुरा गर्छौं कि यो प्रजनन अवधिमा गर्भवती हुन सम्भव छ भने, त्यसपछि कूपिकल परिपक्व ओममको अनुपस्थितिमा, यो सिद्धान्तमा असंभव छ। यो तथ्यलाई थाहा छ, हरेक स्त्रीलाई उपजाऊ अवधि को अर्थ को बारे मा एक विचार हुनु पर्छ, र यो गर्भावस्था को शुरुवात को रोक्न को लागी एक बच्चा को गर्भधारण गर्न को लागि या यसको विपरीत, यो समय सही गणना गरिन्छ।
जुत्ताहरू कसरी कल्पना गर्ने?
पुरानो endometritis र गर्भावस्था योजना
गर्भावस्था को योजना मा ऋषि
दोस्रो डिग्रीको कमजोरी
गर्भावस्थाको योजनामा ​​प्रोजिनोभा
गर्भावस्था हटाउन पछि ठीक छ
कमजोरी 1 डिग्री
अवधारणाको मिति द्वारा बच्चाको लिंग
के म गर्भवती अवस्थामा endometriosis प्राप्त गर्न सक्छु?
महिलाहरु मा ovulation को लक्षण
लिङ्ग कोठा कफी तालिकाहरू
केटी होम्सले जेमी फक्सक्ससँग रोमान्टिक सप्ताहांतको आयोजना गरे
फैशनेबल haircuts - शरद ऋतु-जाडो 2016-2017
कर्ट कोबिनको छोरीले 21 महिनाको विवाह पछि पतिलाई विवाह गरे
आँखाका लागि लिपस्टिक
मैडम टुसुदको संग्रहालयमा शाही परिवारलाई मेगन मार्कलको दर्जामा सामेल हुनेछ
पास्ताबाट नयाँ वर्षको पास्ता
80 को शैली मा कपडे
क्रीम संग मासु
कुखुराको पछाडि रोल
Flaxseed तेल - राम्रो र खराब
खानाको लागि भोजन
नवजातका लागि कुन डायपर राम्रो छ?
दुर्व्यवहार सिस्ट - यो के छ र के यो डराउनुको लायक छ?
एक अपार्टमेन्टमा एक लिङ्ग कोठाको डिजाइन